Apps For Android( အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Apps For Android( အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် )
Apps For Android( အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် )
Posted by kakashi on Sep 11, 2012 in News | 36 comments
FX File Explorer ဆော့ဝဲပါ . ဗားရှင်းအသစ်ထွက်မှာ root လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းများအတွက် root access.apk ဖိုင်လေးပါ တွဲထည့်ပေးထားပါတယ် .
ဆော့ဝဲအပြင်အဆင်ကတော့ လှပသေသပ်ပါတယ် .
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?xm6y394e87i85sy
Temp Monitor App For Android
System temperature reading in your status bar updating at your choice interval .
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?op38av43jfc3t2v
Maps With Me Pro App For Android
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?521d7lsu75tly9k
TEAM BatteryBar Pro App For Android
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?8y9f6oze6orgdky
Clean Memory / Defragger App For Android
Clean is one of the most useful tools you will download for your mobile device!
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?9m46mv5dcwq6ruo
Proximity Screen Off App For Android
Want to feel what gestures can do? Here’s an application which will let!
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?ap7l6sgc6o66r77
Version Update အသစ်ထွက် Smart Launcher Pro For Android
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?bt2g65bd5u2pu5d
Velox Reloaded Premium Game For Android
ပြိုင်မောင်းမယ် . ပြိုင်မောင်းမယ် .
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?f7f49qx1v5fcjdl
Mission of Crisis Game For Android
အထာကျကျဆော့မှ အောင်နိုင်မယ့် ဂိမ်းပါ . ဆော့ရတာတော်တော်လက်ဝင်တယ်
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?hzv11zn5sqss64l
Basketball All Stars Game For Android
ဘတ်စကတ်ဘောကို ပိုက်ခြင်းထဲထည့်ပြီး အမှတ်တိုးပွားအောင် ကစားကြမယ်
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?mowq09tzlub9qgb
BullDozer Inc. Premium Game For Android
ီDOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?50zxytt5d1j8j34
Racing Legends Game For Android
ပြိုင်ကားမောင်းမယ် . မြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းမောင်းလို့ ရတယ်
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?h8xgabchnv75csq
ETERNITY WARRIORS2Game For Android
APK FILE DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?95oqo0ait0y6nft
GAME DATA SD FILES – http://www.mediafire.com/?q578h2iw9c293y4
Instructions : GAME DATA SD FILES : Copy to Android/obb
Final Fantasy Game III For Android
Final Fantasy Game III is on Android !!!
APK FILE DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?dfsj2lbe6o33y5r
GAME DATA SD FILES – http://www.mediafire.com/?eo7o53wy5c7sj3h
2. Copy ‘com.square_enix.android_googleplay.FFIII_GP’ folder to ‘Sdcard/Android/Obb’
obb folder မရှိရင် အသစ်ဆောက်ပေးပြီး ထည့်ရပါမည်
Collins English and Thesaurus App For Android
Collins English dictionary bundle – 500,000 words and 377,000 synonyms !
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?c5i4wa2gb2hiblv
iFighter 1945 Game For Android
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?67z5u83kzlhkzj2
Critter Escape Game For Android
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?q53et3mp2ujlj1b
Black Metal Men Game For Android
MAYBE THE MOST STRESSFUL, DARK AND INTENSE GAME FOR SMARTPHONES
DOWNLOAD – http://www.mediafire.com/?o3k4yux2c1jmc1i
Apps များကိုရနိုင်သလောက်စုစည်းပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ Android ဖုန်းပိုင်ရှင်များ နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်
Kaka Shi has written 1 post in this Website..
View all posts by kakashi →
လောလောဆယ် ဖိုင်နယ်ဖန်တက်စီlll ဖိုင် / အပေါ်က လင့်ခ် ကို ဒေါင်းနေတယ်
ကျုပ်ဖုန်းက ဟွာဝေး စီ8800 ပါ
ဆိုတော့ အပေါ်က လင့်ခ်က ဖိုင်ပဲ ဒေါင်းရုံနဲ့ ကစားလို့ ရပြီလား ဆိုတာလေးပါ ဆက်ရှင်းပြပေးပါဦး
နောက်ထပ်လဲ အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲတွေ တင်ပေးပါဦးဗျို့ 
တပည့် ကြီး says:
apk ဖိုင်ဒေါင်းလိုက်ပြီးရင် Install လုပ်ပြီး ကစားလို့ ရပြီလေဗျာ ဦးဦးထိပ်ပြောင် ရယ်
ကျုပ်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် / ချက်တင်းထိုင်ရုံ / ဝက်ဆိုက်ကြည့်တတ်ရုံ / မန်းဂေဇက်မှာ စာဖတ် ပို့ စ်တင်တတ်ရုံလောက်သာ တတ်တာဗျ
ပထမ ဖိုင်က 1M ဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ ရတယ်
အခု ဒုတိယဖိုင် GAME DATA SD FILES – http://www.mediafire.com/?eo7o53wy5c7sj3h ကို ဆက်ဒေါင်းနေတာ ။ သူက 178M ဆိုတော့ ကြာမှာပဲ ၊
ဒေါင်းနေတယ်ဗျာ ၊ ဒေါင်းပြီးရင် ကစားလို့ ရပါစေ ပဲ ဆုတောင်းနေတယ်
ဖိုင်နယ်ဖန်တစီ ကို ဆိုနီဂိမ်းစက်ရိုးရိုးကတဲက အသဲအသန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းမို့ ပါ
ဒါနဲ့တစ်ခြားအသုံးတည့်မယ့် အပလီကေးရှင်းလေးတွေကိုလဲ ဆက်တင်ပေးဦးနော
နည်းပညာဆိုက်ကြီးဖြစ်သွားပါဦးမယ် ဟီးးးး တော်ကြာ ဆော့ဝဲလ်ပို့တွေအောက်မှာ ရန်ဖြစ် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြီး အတင်းတွေ လာတုတ်နေကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တစ်ဆိုက်လုံးမှာလဲ ရန်ဘဲဖြစ်နေကြတာ ခွိခွိ
ဒါက ရန်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာကို ဆင်နွှဲကြတာပါ။ ရွာသက်ကြာလာတဲ့အခါ သိသွားပါလိမ့်မယ်။
နည်းပညာဆိုဒ်ဆိုတော့လည်း ကောင်းတာပေါ့ရှင် ။ ကျမတို့တွေ ဒီမှာ တထိုင်ထဲ အသိတွေ ဗဟုသုတတွေ အစုံ ဆည်းပူးလို့ ရတာပေါ့။ ပညာကို ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ပညာဒါနမြောက်ပြီး ဒီထက်မက ပိုပြီး အသိကြွယ်သူတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီလင့်လေးလည်း သူငယ်ချင်းတွေဆီ ရှယ်ထားပါတယ်။
ကို တပည့်ကြီး… စာဖတ်သူအပေါ် စေတနာထားပြီ့း အကျိုးရှိတဲ့ စာတွေတင်တာကိုမှ ဆဲချင်ရင်တော့ ..သူ့တို့ဘာလဲဆို ကိုယ်တိုင်ပြောပြတာပဲလေ..။ နည်းပညာဆိုဒ်ကြီးဖြစ်သွားရင်တောင် စာဖတ်သူတွေ အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အဆဲခံရတောင် ကျနော်တို့ရေးနေရလိမ့်မယ်။ နည်းပညာနောက်ကျနေတဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်က တစ်ဖက်တစ်လမ်းကူညီပေးတာ ၊ ဗဟုသုတပေးတာ မှားတယ်ဆိုရင် …..အာဟိ..ဆဲစေဗျား…။ မန်ဘာ အသစ်ဆိုပေမယ့် အဟောင်းတွေထက် ပိုပြီးအကျိုးပြုနိုင်ရင်၊ အတွေးအခေါ်ပေးနိုင်၊ ဗဟုသုတပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် …ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ချိန်တုန်းက သမက်ပါဗျ။
ဒဗျည့်ဂျီးရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် အလွန်ဂုဏ်ယူမိဘာဒယ်
About the lastest Virus and Technical Support
စကားမစပ် သတင်းတစ်ခုရလာတယ်ဗျို့ Security Alert ပါ ..အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် … ဘယ်လို Operation System တွေကို Target ထားပြီးတိုက်ခိုက်ထားလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ် …
မှာလေ့လာနိုင်တယ် … သတင်းကတော့ http://www.mmcert.org.mm/Services.aspx ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါဗျာ ..ကိုယ့် OS တွေကိုလည်း သတိထားဦးပေါ့
ညကအိမ်က အင်တာနက်ပျက်တာ.. ဆားဗစ်ဖုန်းဆက်တော့ဘယ်နှရက်ကြာမယ်မသိသေးဘူး..။ ဆိုတော့.. ကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းက .HTC EVO 4G
.အဲဒါနဲ့..လက်ပ်တော့ကနေ.. အင်တာနက် ဖရီးတက်လို့ရတဲ့ tethering apkလေးသိရင် ပေးပါကွယ်..
ကျနော် သိတာ လေး ကို လင့် ပေး လိုက် ပါတယ် သဂျီး။ အဆင်ပြေမယ် လို့ ထင် ပါတယ်။
စေတနာကို စော်ကားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ဖိုင် တွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင် တယ်လို့ ထင်တယ်လား။
ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုတာ အဲဒီ game downloading တွေက ပါတတ်တယ် ကြားဘူးလို့ပါ။ :-)
– Do Not insert anyone’s memory card without scanning it.
– Do Not plug-in your data card to any computer, the computer may have viruses.
– Do Not accept MMS from unknown numbers
– Do Not install apps which are not turstworthy.
ကိုယ့်ကွန်ပြူတာ ကို ဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစေချင်ရင် ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့၊ မယုံရလောက်တဲ့ Link တွေ ကို Click မလုပ်ကြပါနဲ့။
အရီးခင်လတ် ရယ် apk ဖိုင်ကို လိုက် Bind တဲ့ Trojan,Malware လို့တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူးဗျာ ..
အခု Android Trojan တော့ပေါ်နေတယ် ကျနော့ လင့်တွေမှာ မပါ ပါဘူး .. စိတ်သန့်သန့်နဲ့သုံးပါ
ဒါနဲ့ Kai အတွက် Easy Tether Pro ပါ
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာမှာထည့်မယ့် EXE ဖိုင်ဒေါင်း မယ့်နေရာပါ
Android Trojan လုပ်ပုံလုပ်နည်းအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်းပြောကြည့်ရအောင်။ Trojan ဆိုတာကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ အစဉ်အလာနဲ့နေလာတာဆိုတော့ android os ပေါ်လာချိန်မှာသူလဲ တစ်ခေတ်ထနေပြန်ရဲ့။ အဲ့trojan တွေ ဘယ်လိုဝင်တာဆို တာတော့ ကိုယ်ပေးဝင်လို့ ဝင်တာပါပဲ။ ခင်ဗျားဖုန်းကို google က ကိစ္စအချို့ကို ဖယ်လိုက်လို့ သိပ်မအံသြပါနဲ့တဲ့။ malicious codeers တွေက Android အတွက် Trojan တွေရေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ ။
Technical Director for Security Reponse က Eric Chien က brand-new Trojan တစ်ကောင်ကို ပရိတ်သတ်ရှေ့မှာရိုးရှင်းသောနည်းတွေနဲ့ ရေးပြခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့ သူ sample app က အဲ့အခန်းထဲ မှာပဲရှိတာပါ။ တနည်းပြောရင် ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်ပေါ့။ သူပုံစံအတိုင်းတစ်ခြားမြောက်များစွာသောအကောင်လေးတွေပဲ ထွက်လာတာ ။
ကဲ ခု Chien ရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ငါးချက်ကိုပြောပါ့မယ်။
၁။ free app တစ်ခု download ဆွဲလိုက်ပါ။ လူကြိုက်များတဲ့တစ်ခုဆိုပိုကောင်းတာပေါ့။
၂။ PC နဲ့ Suit ဖြစ်မယ့် language compiler တစ်ခုနဲ့ source code ယူ ပြီးရင် CPU နားလည်တဲ့ assembly language ကိုပြောင်းလိုက်။ ဒီနည်းလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ် final executable file ကို source code ပြောင်းဖို့ဆိုတာ။ android app တွေက Java language နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ original source code ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ tools တွေနဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
၃။ ဒါကတော့နဲနဲလက်ဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သုံးမယ့် app က user information တွေကို third party app တွေ ဆီေ၇ာက်အောင် သုံးလုပ်နိုင်မယ့် app တွေဆိုပိုကောင်းမယ်ဗျာ။ Chien ကတော့ demonstration မှာ Android.Geinimi ကို သုံးသွားပါတယ်။
၄။ Trojan code ထည့်တာကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ source code ရှိတဲ့ folder ထဲကို ထည့်မယ် ပြီးရင် Trojan code ကို တစ်ခြား app ထဲက code တွေထက် အရင် run အောင်နဲနဲချိန်းမယ်။ ပြီးရင် Trojanized app ကို device တစ်ခုလုံး ထိန်းချုပ်ခွင့်ရအောင် permission ပေးမယ်။ ပြီး ရင်တော့ အဲ့ app ကိုနာမည်ချိန်းလိုက်ပေါ့။ “FREE!!!!” လို့ပါရင် လူတိုင်းကြိုက်တယ်မလား။ (ဒါရေးပြီးရင် ဝယ်ပဲသုံးတော့မယ် app တွေကို )
၅။ အားလုံးပြီးသွားရင် တော့ modified app ကို compile လုပ်။ မပြောင်းလဲ ရှိတဲ့ market ပေါ်မှာ တင်လိုက်တော့။ ပြီးရင် ပြီးပြီ။
အခု လို Trojan မျိုးပါတဲ့ app ကို android Market က လက်မခံပါဘူးတဲ့။ လက်မခံလို့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ တရုတ် ဖြစ် အောင်ကျင့်ကြံလိုက်။ China Market မှာသွားတင်လိုက်။ ကံကောင်းလို့ ကိုယ်ရေးတတ်ရင် တရုတ်မလှလှလေးတွေရဲ့ Photo လေးတွေရမှာနော်။ အဲ့ရကျင် အနော်ကို မမေ့နဲ့နော် ။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ. iOS အတွက် application ကောင်းလေးတွေလည်း မျှဝေပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ ရှင့်
မယ်ကုက iOS သမားလား….
လာစမ်းပါ… ကျုပ်ဆီမှာ အလန်းဇယားအပလီတွေ ၄၀ဂစ်လောက် လက်ရွေးစင်သန့်ထားတာတွေရှိသဗျို့…
Android ဖုန်းအတွက် Anti-virus ထည့်လို့ရလားသိချင်ပါတယ်. ရှိရင်လည်း Link လေးလိုချင်ပါတယ်. Game ကတော့ဖုန်းနဲ့ကစားကောင်းပြီး မျက်ရိုးကိုက်ရောဂါစွဲကပ်သွားလို့ နားထားတယ်. ဝေမျှထားတာ လေးတွေလည်းကျေးဇူးပါ
ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေလိမ့်မယ် Crystalline ရေ
Kaspersky Tablet Security v9.14.14 for Android (Full Version)
ကျုပ်မတော့ စီဒီအမ်အေ ဖုံးစုတ်လေးနဲ့ ဆိုတော့ ငေးမှိုင် ထိုင်ကြည့်ဘဝ ပါ …
နေနှင့်ဦး … မွေးမဆီက ပိုက်ပိုက်လေးချော့ တောင်းပြီး ဟမ်းဆက်ကောင်းကောင်း
နဲ့ ဂျီအက်စ်အမ် ကဒ်လေး ဝယ်ပါမှ ….။
ကျေးဇူးရှင်ရယ် ဂျပန်မ ဖင်ချွတ်တဲ့ apk လေး စောင်မတော်မူပါဦး
သောက်ပလုတ်တုပ် ရုတ်တရက် အင်ထရို တောင် မရှိပဲ လင့်တွေကောက်ရေးထားတော့
ပညာရှင် တွေ ဒို့ ရွာထဲ အုပ်အော်သောင်းနင်း တော်သလင်းလ ခွေးမနား ခွေးထီးများ အုံနေသလားပဲ
ဝမ်းသာလှသဗျား စကားမစပ် MMUG က ကန်ထုတ်လိုက်လို့ ရွာထဲ ဝင်မွှေနေတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပ ငါ့ရှင် ။
လိုက်ရှာရင် အမှားများတယ် …မေးလ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ် E-mail ချန်ခဲ့လေ
နှံ့စပ်ပုံများ အောချလောက်တယ် ရွာထဲမှာတင် မေလ်း အကောင့်ကို သိအောင်ရှာလို့ ရပါတယ် ။
ရော့ရော့ . . . jaemin0311@gmail.com ဒီအကောင့်က ကျုပ်ရဲ့ တသက်စာတွေ အကုန်ရှိတယ်နော်
သူများ တသက်စာက ကိုယ့်တသက်စာ မဖြစ်သွားအောင်တော့ သတိလေးနဲ့ပို့ ပေါ့ကွယ်
ကဲဗျာ ရှူပ်ပါတယ်5MB ကျော် လောက်ရှိတယ် တင်ပေးလိုက်ပြီ .. အများကြီးဘဲနော် ဟိဟိ
တပည့် ကြီး ဆိုတဲ့..နာမယ်လေးပြင်ပေးဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူးလား..။ခေါ်ရတာ အားနာစရာ..
ဖိုင်ကို သတိထားကြစေကြောင်း. iLividSetupV1.exe မဟုတ်ပဲ.. apk နဲ့ဆုံးတာဖြစ်ကြောင်း..
.. ကျေးကျေးပါ ဆြာရေ့..
Mr Admin လို့ရေးထားတာ ၀ိုင်းပြောကြလို့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြင်လိုက်ရတယ် သဂျီးရေ
ဆရာဆို တာ တချိန်တုန်း က တပည့် ပါပဲ လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါ လား ကို တပည့် ကြီး ခင်ဗျာ။
Bug လို့ ပြင်ပါလား။
Bug Life ထဲက မင်းသား လေးမို့။
ဟုတ်တယ် နာမည်လေး ပြင်ပေးစေချင်တယ်။ ခေါ်ရမှာ အားနာစရာပါ။
ပြောင်းလိုက်ပီဗျာ ……………… သုံးခေါက်ကျပြီနော် ဒါနဲ့ဆို
သတ်ပုံအဖွဲ့ နဲ့ တွေ့တော့မယ်။ တွေ့တော့မယ်။
လေးခေါက် မြောက်တော့ မြင်ယောင်မိသေး။
လာပြီ လာပြီ ..
အပေါ်က လူစိုးကြီးဆိုတဲ့ အူးလေး
“လူဆိုးကြီး” လို့ ပြန်ပြင်လိုက်ပါ
အမ် ဘယ်လို နာမည်ကြီးပါလိမ့် ကြီးမားလိုက်တာ …
အခေါ်တော့ အတော်ကျင့်ယူရမယ် ထင်တယ် …:P
သံတွဲသား ဟက်ကာပေါက်စ လူစိုးကြီး(အစိုး)ပါလား။
နာမည်တွေ အများကြီးနဲ့ အကောင်တစ်ကောင် အနီတွေလာပေးထားတယ်ထင်တယ် ဟိဟိ
လူပူလေး မှားနေပြီ ကွယ် …